Misy ny fanararaotana… : manafosafo ny 2000 Ar ny kilaon’ny vary | NewsMada
Misy ny fanararaotana… : manafosafo ny 2000 Ar ny kilaon’ny vary
Tato anatin’ny herinandro izay, tafakatra 200 Ar ka hatramin’ny 300 Ar ny kilaon’ny vary eny an-tsena. Mahatratra 1.800 Ar ny kilaon’ny vary makalioka tsara raha 1.500 Ar izany teo aloha. Manodidina ny 1600 Ar sy 1700 Ar kosa ny kilaon’ny vary gasy raha 1.300 Ar izany teo aloha.
Raha ny filazan’ireo mpiantsena eny Anosibe, manahy ny fanararaotana ataon’ireo mpivarotra ny mpanjifa. Misy manitrika na manafina ny vary ary mitetika ny haka tombony be atsy ho atsy rehefa hirotsaka eo ny orana.
Tsy maintsy hisy fiantraikany amin’ny fambolem-bary ny tsy fisian’ny orana amin’izao taom-pambolena izao. Efa mikajy ny tsy fisian’ny vary afaka telo volana sahady ny mpamongady ka manao tahiry ka anisan’ny mampisondrotra ny vidim-bary izany.
Tsy hijanona hatreo ny fiakaran’ny vary fa tsy maintsy hitohy raha ny filazan’ireo mpamongady etsy Anosibe. Efa mihena ny vary aterin’ireo mpanangom-bokatra tato anatin’ny roa herinandro izay. “Mailo izahay ary tsy maintsy mitsinjara ny entana ka mampirina izay azo hamidy hitsinjovana ny mpanjifa afaka roa na telo volana”, hoy Raody, mpivaro-batsy etsy Anosibe.
Ratsy ny voka-bary teto Antananarivo
Raha ny filazan’ireo mpamboly eto amin’ny lemak’Antananarivo, ratsy ny voka-bary tamin’ity taona ity. Efa betsaka ireo mijinja vary amin’izao fotoana ary mahatsapa fa nanakofa ny vokatra noho ny tsy fahampian’ny rano nanondraka ny tanimbary. Tsy nahazo aina firy ny foto-bary noho ny tsy fisian’ny orana nanondraka.
Ampy hanamainana tsara ny vary kosa anefa ny andro maina ary tsy atahorana ho lo ny vary kely vokatra. Tsy mahavita taona toy ny mahazatra ny vary satria 10 gony fotsiny no azo raha 15 gony izany isan-taona.